Filtrer les éléments par date : mercredi, 20 novembre 2019
mercredi, 20 novembre 2019 08:14
67 HA: Tovovavy 05 tratra nanendaka
Mbola tsy ampy taona ny efa-bavy, ary 22 taona ny zokiny indrindra amin’ireto mpanendaka ireto. Zaza roa, 6 taona sy 8 taona, niaraka tamin’ny Renibeny avy namonjy fiangonana ny Alahady teo no nendahin’izy ireo raha niditra elakelan-trano teny amin’ny faritry ny CEG 67ha iny. Lasan’izy ireo ny kitapon’ireo zaza.
Nikiakiaka mafy anefa ireto zaza ireto, ary nisy ny olona manodidina no naheno izany ka nivoaka avy hatrany. Vao nahita ireo olona nivoaka ireto ankizivavy dia nirifatra nandositra avy hatrany, saingy voasambotry ny Fokonolona ny iray, ary natolotr’izy ireo ny Polisin’ny boriborintany fahafito etsy 67ha. Nanao ny fanadihadiana ny Polisy ka ny ampitson’io Alahady io dia voasambotra tany an-tranony tsirairay avy ireto ankizy vavy ireto.
Efa tsy misy mianatra avokoa izy dimy vavy. Misy efa manan-janaka ary tsy misy miasa avokoa.